डचटाउन समर भाइब्स २०२२
प्रकाशित जुन 18th, 2022
डचटाउन समर भाइब्स फिर्ता आयो! प्रत्यक्ष संगीत, खाना र पेय, किनमेल, बालबालिकाका गतिविधिहरू, सामुदायिक स्रोतहरू, र थपको लागि शनिबार जुलाई9मा डाउनटाउन डचटाउनमा हामीसँग सामेल हुनुहोस्!
समर भाइब्स मिशिगन एभिन्यू देखि लुइसियाना एभिन्यू सम्म मेरामेक स्ट्रिटको साथ ऐतिहासिक डाउनटाउन डचटाउन कमर्शियल डिस्ट्रिक्टमा एक सडक उत्सव हो। सबैलाई केही धुनहरूको आनन्द लिन, हाम्रा रेस्टुरेन्टहरू र खाना बिक्रेताहरूबाट एक टुक्रा लिन, हाम्रा बुटिकहरू र फुटपाथ पप-अपहरूसँग किनमेल गर्न, र हाम्रो समुदायको बारेमा थप जान्न आमन्त्रित गरिएको छ!
हामी यो पृष्ठलाई थप विवरणहरूको साथ अपडेट गर्नेछौं जब हामी ठूलो दिन नजिक पुग्छौं! आफ्नो ब्राउजरमा देखाउनुहोस् dutchtownstl.org/vibes अद्यावधिक राख्न।
हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईं आउँदै हुनुहुन्छ र आफ्नो साथीहरूसँग साझा गर्नुहोस् फेसबुक घटना पृष्ठ.
यो गर्मी हो, आखिर! हामीसँग बच्चाहरूको लागि धुंधको पाल, पानी र चिसो उपचार हुनेछ! डचटाउन समर भाइब्स कूलिङ स्टेशन द्वारा प्रायोजित छ रोजगार जडान र सेन्ट लुइस को आवारा उद्धार.
डचटाउनमा तपाईलाई दिनभरि निरन्तरता दिनको लागि खाना छ! विभिन्न प्रकारका मन्चीहरूका लागि अर्बन ईट्स नेबरहुड फूड हलमा जानुहोस्—सबै रोल्ड अप, Crepes र व्यवहार गर्दछ, सुगोई सुशी, र टाकोस ला जेफा। हामीसँग अन्य स्थानहरूमा खाना विक्रेताहरू पनि हुनेछन्, सहित मुन्च वैगन। र हामीले बाट पेय पाएका छौं अर्थबाउन्ड बियर!
नेबरहुड इनोभेसन सेन्टरको स्टेज प्रत्यक्ष स्थानीय संगीतको साथ रकिङ हुनेछ! निम्न कलाकारहरू डचटाउन समर भाइब्समा देखा पर्ने कार्यक्रम छ:
डीजे प्रॉस्पेक्ट आउट Hrr
सर एडी सी
हाम्रा प्रायोजकहरूलाई धन्यवाद
हाम्रो Dutchtown Summer Vibes प्रिमियर प्रायोजकहरूलाई विशेष धन्यवाद Crawford-Butz बीमा एजेन्सी र अवतार शब्द फाउंडेशन!
हामी प्रायोजकहरूलाई क्योर वाइलेन्स डचटाउनलाई पनि धन्यवाद दिन्छौं, डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला, अर्थबाउन्ड बियर, रोजगार जडान, टाइम्स ट्याटू को चिन्ह, सेन्ट लुइस को आवारा उद्धार, र डचटाउनको U-Haul सार्ने र भण्डारण.
तल दायर गरिएको डचटाउन कार्यक्रमहरू. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन, डचटाउन सीआईडी, डचटाउन कार्यक्रमहरू, र डचटाउन मुख्य सडकहरू. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जुन 24th, 2022 .
डचटाउन STL.org डचटाउन कार्यक्रमहरू डचटाउन समर भाइब्स २०२२